Ny taxi amin'ny ho avy dia ao anatin'ny ankehitriny (I): Cabify | Vaovao IPhone
Ny taxi amin'ny ho avy dia ao anatin'ny ankehitriny (I): Cabify
Carlos Sanchez | | Fampiharana iPhone
Nanomboka andian-dahatsoratra izay heveriko fa tena hahaliana izay hijerena ireo rindranasa fitaterana mpandeha lehibe izay ampiasaina eran'izao tontolo izao. Ary hanomboka amin'ny rindrambaiko iray izahay, izay tsy misy ilay mitabataba indrindra, dia manana fanamarihana miavaka ao Espana sy Amerika Latina: Cabify.
Fantatra amin'izany rehetra izany Uber any Espana Nahita fandrika bebe kokoa noho ny nandrasana tamin'ny fitantanana izy, ary izany dia na eo aza ny fanolorana serivisy mazava kokoa noho ny an'ny taxi amin'ny lafiny rehetra (angon-drakitra azo ekena ho an'izay nampiasa ny serivisy roa), avy amin'ny Associations izay mitantana Ireo taxi dia nanizingizina ara-dalàna ny hanandrana hanapaka ny elatry ny goavambe amerikana avaratra. Niverina niaraka tamin'ny fahazoan-dàlana VTC tany Madrid i Uber, fa i Cabify kosa dia mpifanolo-bodirindrina tena manan-kery sy manan-kery ary misy any amin'ny tanàna maro noho ny orinasan'i Travis Kalanick.
2 Tanàna maro kokoa
Raha misy zavatra ankasitrahana rehefa mampiasa rafitra fitaterana mpandeha dia haingana sy mora ny zava-drehetra. Miasa mitovy amin'ny Uber na Lyft i Cabify: Mahita ny fiaviany ho antsika izany, miditra amin'ny toerana alehantsika isika, mahazo tahan'ny ary miandrasa fiara haka antsika. Ny fandoavam-bola dia mandeha ho azy rehefa mamita ny dia na amin'ny karatra na PayPal, izay rehetra tadiavintsika.
Toa miharihary ny tombony azo amin'ny taxi, fa vao mainka mihamafy rehefa hitantsika fa amin'ny tranga 9 amin'ny 10 handeha amin'ny fiara tsara kokoa isika, Afaka misafidy amin'ny serivisy samihafa isika arakaraka izay ilaintsika na tiana aloa, fa ny fiara manana varavarankely miloko hanomezana antsika fiainana manokana na ny mpamilintsika hitafy palitao ary hanome antsika rano mineraly raha te hiditra hydrate isika. Mazava ho azy izany rehetra izany.
Tanàna maro kokoa
Ny tombony lehibe ananan'i Cabify mikasika an'i Uber any Espana dia ny misy azy amin'ny tanàn-dehibe maro toy ny Valencia, Barcelona na Malaga, raha tsy ny Madrid ihany no iasan'ny Uber anio. Toy izany koa, misy firenena sasany any Amerika Latina izay iasan'ny Cabify amin'ny fahombiazana miavaka, noho izany dia raharaha ho an'ny tsirairay ny manapa-kevitra hoe serivisy inona no hampiasaina arakaraka ny toerana misy antsika.
Misy ny fakam-panahy tsy azo ihodivirana demony ilay taxi Eo izy, fa tsy izaho no hanao azy. Nandeha fiarakaretsaka marobe aho, ary nitaingina mpamily fiarakaretsaka mahafinaritra, na dia marina aza fa ny tahan'ny dia mahafa-po dia ambany lavitra noho ny an'ny serivisy toa an'i Cabify. Ary raha mieritreritra azy isika, ny tena izy dia tsy nahalala ny fomba hifanarahana amin'ny tsena ilay taxi, efa taraiky ary nanandrana nanakana ny rà tamin'ny alàlan'ny fitakiana sy fitakiana ny fitantanan-draharaha. Saingy tsy azo sakanana ny fandrosoana ary an'i Uber, Lyft na Cabify ny ho avy.
Mazava ho azy fa mitaky fisintomana ny fampiharana sy fisoratana anarana i Cabify - afaka manao roa ianao avy amin'ity rohy ity inona no tafiditra Fanomezana 6 € ho an'ny dia-. Raha aleonao misintona ny fampiharana ary misoratra anarana tsy misy fanomezam-pahasoavana fanomezana, azonao atao ihany koa izany tsy mila olana eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny taxi amin'ny ho avy dia ao anatin'ny ankehitriny (I): Cabify
Inona no nomen'ny Cabify anao tamin'ny fametrahana an'ity lahatsoratra ity izay tsy manome fampahalalana mahasoa ary ny faharoa dia ny doka "maimaim-poana" tanteraka?
Ilay mpaneho hevitra dia hoy izy:
Azonao atao sahady ny mametraka lahatsoratra hanambarana ny tahan'ny taksi ofisialy, izay mora kokoa ary mandoa hetra isan-karazany. Ankoatry ny fanananao ireo taksiborosy ambony sy ambony izay tsy andoavam-bola mihoatra ny ambin'ny taksibe ofisialy dia manome sosokevitra ianao fa taxi ny ankehitriny sy ny ho avy, rehefa misy sehatra fivezivezena marobe.
Valio ilay mpaneho hevitra
Miquel dia hoy izy:
Mamporisika ny vola mainty ... tsara! Tsarovy ny cabify sy uber rehefa sendra loza ianao ary tsy manarona anao ny fiantohana anao, na rehefa misotro ronono ianao ary tsy misy vola handoavana ny fisotroan-drononoo
PS: inona no karamanao tamin'ity doka ity?
Mamaly an'i Miquel
Prayd dia hoy izy:
Mipetraka amin'ny tanàna any Amerika Latina aho izay ity mpiasa ity dia heverina ho serivisy lehibe. Aza adino fa ny matihanina amin'ny mpamily fiarakaretsaka mahazatra dia tsy ny tsara indrindra. Amin'ity APP ity isika dia afaka mahita fiofanana mpamily sy kalitao ary fampiononana amin'ny fiara. Ankoatry ny fanitsiana ny tahan'ny eo an-toerana, manjaka ny fampiononana sy ny filaminana amin'ireo faritra ireo.
Nampitandrina izy fa tsy nahazo karama tamin'ilay fanehoan-kevitra aho, manoratra izany ho an'ny zava-misy tsotra momba ny fampiroboroboana ny fomba hafa.
Valiny amin'i Prayd